I-Brandnew 0 umjikelezo we-iPhone 8 Plus esikhundleni sebhethri
Incazelo:I-iPhone 8 Plus Ibhetri,brandnew iPhone 8 Plus ibhetri,Ukushintshwa kwebhethri ye-iPhone 8 Plus,0 umjikelezo we-iPhone 8 Plus ibhetri,,
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery > I-iPhone 8 Plus Ibhetri
I-iPhone 8 Plus Ukusekelwa kwebhethri Yokugcina iOS i-Update  Xhumana Nanje
Umjikelezo we-Zero omusha we-iPhone 8 Plus Ukusekela Ukusetha Ibhetri Yokugcina IOS Update I-iPhone 8 Plus 2691mAh 4.35V 10.28whr I-Apple iyakuthanda imodeli yase-Older ye-iPhone ingase ihlehliswe ngenxa yebhethri eliguga. Uma udinga iOS iPhone Plus...
I-China I-iPhone 8 Plus Ibhetri Abahlinzeki
Ibhethri ye-iPhone 8 Plus A1864, A1897, A1898 kuphela (hhayi i-iphone 8) (Sicela uhlole inombolo ephathekayo yomtapo esikhwameni sangemuva)
Ukuphila isikhathi eside kunamabhethri okuncintisana.
Bheka Izithombe, empeleni sisebenzisa umhloli ukuhlola umthamo wangempela webhethri. hhayi nje ngokubuka ilebula yebhethri. Ibhethri entsha yekhono eligcwele lomkhiqizo nge-cable entsha ye-flex, ehambisana kakhulu nama-specs ebhethri we-Apple original. Ukulinganisa okuphelele kwe-99% nokuphezulu komthamo webhethri we-Apple wokuqala. Kuhle kakhulu ekushintsheni ibhetri yokulungisa. Ayikho insizakalo yezinsizakalo zokulandelela kusukela ekusetshenzisweni kwamabhethri okuphila okuncishisiwe ama-postmarket! Faka esikhundleni ibhethri efonini yakho bese ukhokha ngokugcwele (usebenzisa ishaja yase-Apple kuphela).
Xhuma kwi-intanethi nge-WiFi futhi udlale ividiyo ye-HD ye-intanethi Ngesikhathi Esifanayo. (Okokuqala kwe-iPhone entsha ye-Apple ku-website yabo: ukusetshenziswa kwe-intanethi: Kufika kumahora angu-11 ku-Wi-Fi, noma ukudlala kwevidiyo ye-HD: Kuze kube amahora angu-11).
I-iPhone 8 Plus Ibhetri brandnew iPhone 8 Plus ibhetri Ukushintshwa kwebhethri ye-iPhone 8 Plus 0 umjikelezo we-iPhone 8 Plus ibhetri I-iPhone 7 Plus Ibhetri